‘नाई नभन्नु ल ५’ का ३ हिरोइनः प्रियंका नबोल्ने, केकी अमेरिका, स्वस्तिमा व्यस्त....... - Everest Media News
Home मोडेल ‘नाई नभन्नु ल ५’ का ३ हिरोइनः प्रियंका नबोल्ने, केकी अमेरिका, स्वस्तिमा व्यस्त…….
‘नाई नभन्नु ल ५’ का ३ हिरोइनः प्रियंका नबोल्ने, केकी अमेरिका, स्वस्तिमा व्यस्त…….
In: मोडेल, सेलिब्रेटी
निर्देशक विकासराज आचार्यले चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ५’मा ३ चर्चित नायिकालाई अनुवन्ध गर्दा सोचेका थिए होलान्, पब्लिसिटीमा राम्रै फाइदा हुन्छ । तर, चलचित्र रिलिज हुन करिब २ साता मात्र बाँकी रहँदा विकासले कुनै पनि नायिकाहरुबाट सोचेको साथ पाएका छैनन् ।
चलचित्रकी मुख्य नायिका स्वस्तिमा खड्का शुक्रबारदेखि नयाँ चलचित्र ‘बुलबुल’ मा व्यस्त हुँदैछिन् । यो चलचित्रमा समय दिनुपर्ने भएकाले अब स्वस्तिमासँग ‘नाई नभन्नु ल ५’को पब्लिसिटीका लागि समय छैन ।
अर्की नायिका केकी अधिकारी अमेरिकामा छिन् । उनीसँग पनि यो चलचित्रका लागि समय छैन । आफैले लगानी गरेको चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’का लागि दिनरात नभनी दौडिएकी केकीले ‘नाई नभन्नु ल ५’का लागि समय छुट्याउन आवश्यक ठानिनन् । हुनत, यो चलचित्रको मुख्य नायिका उनी होइनन् । चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्‍यो भने त्यसको क्रेडिट केकीले लिन खोज्छिन् या के गर्छिन् हेर्न बाँकी छ ।
यता ‘नाई नभन्नु ल’को दोश्रो सिरिजदेखि लगातार काम गरिरहेकी नायिका प्रियंका कार्की मिडिया फेस गर्ने मुडमा छैनन् । यसको पछाडि कारण छ । चलचित्र ‘कथा काठमाण्डु’मा प्रियंकाले दिएको उत्तेजक दृश्यको कारण उनको चर्को आलोचना भैरहेको छ । प्रचारमा हिँड्दा यही विषयमा बढि प्रश्न आउन सक्ने भएकाले उनी केही समय मिडियासँग दुरी बनाउन चाहन्छिन् । त्यसैले उनले ‘नाई नभन्नु ल ५’ को प्रचारमा हिड्न नसक्ने जानकारी गराइसकेकी छिन् । उनी कति समय मिडियाबाट भाग्छिन् हेर्न बाँकी छ ।
तर, चलचित्रका निर्देशक विकासराज आचार्य भने ३ नायिकाको विषयमा केही नबोल्ने बताउँछन् । चलचित्रको ‘बालापन’ बोलको गीतको भिडियोमा पनि विकासले ३ नायिकालाई पनि नृत्य गराउन चाहेका थिए । तर, तिनै जनाले समय दिन नसकेपछि गीतको भिडियोमा अनुभव र सेड्रिनालाई मात्र अभिनय गराइएको छ ।
अब फिल्मको पब्लिसिटीमा पनि यीनै दुई बालकलाकार प्रयोग गर्नुको विकल्प उनीसँग रहेन । फिल्ममा नवनायक अभिषेक नेपाल पनि छन् । तर दर्शकले उनलाई चिन्दैनन् । विकास भने अनुभव र सेड्रिना नै मुख्य कलाकार भएकाले उनीहरुको साथ भए पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
निशान हत्या प्रकरणः मुख खोले गृहमन्त्रीले, घटना बारे छानबिन हुने पढ्नुहोस पुरा …..
‘कथा काठमाण्डु’को दोश्रो गीत ‘जुन अनी तारा’ सार्वजनिक हेर्नुहोस भिडियो……
शाहरुख खान छोरी सुहाना खान अहिले फेमस स्टार किड्सको रुपमा सेलिब्रेटी……
साम्राज्ञीलाई देखेरै दिक्क लाग्ने किन हो पढ्नुहोस पुरा……
यी हुन् नेपाली हस्तीहरु जसले करियरका लागि डिभोर्स लिए….
बिज्ञापनको दुनियाँमा प्रियंकाको एकलौटी राज , बनिन् महंगी नायिका………